Ungaluhlengahlengisa njani useto kwi-Fortnite
Imenyu yezicwangciso kwindawo ethandwayo Umdlalo wamashumi amane ifumaneka kumantla ekunene kwigumbi lokungenisa. Xa ukhetha olu khetho, ubona iscreen esifana nesibonisiweyo.
Uninzi lwezinto ezikwesi sikrini zinolwazi, gcina i icon yegiya ekunene yeyona ndlela iphambili yokuguqula useto kunye nolawulo. Icala lasekhohlo lale menyu libonisa ibhena yomlinganiswa wakho kunye nemithambo emithathu yamalungu eqela elinokubakho. Yonke enye into, nazi iinkcazo ezimfutshane:
Ingxelo: Thumela ingxelo ngefom malunga neebugs okanye amava omdlalo.
Xela umdlali: Xela omnye umdlali kusetyenziso gwenxa loqhakamshelwano, igama elihlaselayo, ukudibana neentshaba, ukungcungcuthekisa, okanye ukukopela nokugenca.
Ubumfihlo: Guqula useto lwangasese ukuze uvumele abanye ukuba bajoyine umdlalo wakho. Izinketho ezinokuthi zenziwe nguRhulumente, Abahlobo, okanye baBucala.
Khetha indlela yemidlalo: Buyela kwiscreen sokhetho lweMowudi yoMdlalo.
I icon: Ulwazi olusemthethweni lwe-Fortnite, olubandakanya isiVumelwano seLayisensi yomsebenzisi wokugqibela, okanye i-EULA, kunye neSaziso seSoftware yeQela lesiThathu.
Imidlalo ye-Epic icon: Uyilo lwe-Fortnite, ukukhula, kunye nokupapasha iikhredithi.
I icon yebhodi eqhotyoshwayo: Ivula com iwebhusayithi kwaye ibonisa ikhowudi yamvanje yokuziphatha.
Uphawu lomfanekiso wombuzo : Ivula helpshift.com iwebhusayithi kwaye inikezela amakhonkco ukwazi ngakumbi ngezihloko ezahlukeneyo ezinxulumene neMidlalo ye-Epic kunye neFortnite.
Apha ngezantsi kophawu lombuzo kwiinguqulelo zePC kunye neMac zeFortnite, kukho iqhosha lokuPhuma loMdlalo. Kuwo onke amanye amaqonga, uyeke umdlalo ngokungathi ungawenza nawuphi na umdlalo okanye usetyenziso. Amanye amaqonga ane icon yokuphuma, ekukhutshelwa ngaphandle kokungena kwiakhawunti yakho kwaye ijongeka ngathi sisakhelo somnyango kunye notolo olukhombe ngasekhohlo embindini.
nini ukuthatha prilosec
Kwiinguqulelo ze-iOS kunye ne-Android, kukho iindlela ezimbini zokongeza, uLawulo loNcedo kunye nesixhobo sokuyilwa kwe-HUD. Uncedo kulawulo lubonisa umfanekiso ochaziweyo kwimowudi yomdlalo wokulwa kunye nokwakha imowudi yolawulo, ngelixa isixhobo sokuyilwa kwe-HUD sikuvumela ukuba uhambise izinto ezahlukeneyo kwiscreen seentloko ezisezantsi zokubonisa ukuze zilungele ukhetho lwakho.
Xa ucofa kwi icon yegiye ekunene phezulu kwiZikrini, uya kuboniswa ngeendlela zokhetho ezifana nezo ziboniswe kulo mzobo ulandelayo. Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, iinketho zethebhu zezi:
Ividiyo: I-icon yokuqala, ebonisa esweni, kwaye engafumanekiyo kwiNintendo Shintsha. Ilungisa useto lwembonakalo eyahlukeneyo ukuphucula ukubonakala okanye ukusebenza komdlalo.
Umdlalo: I-icon yesibini, ebonisa iigesi. Ilungisa indawo kunye nezicwangciso ezahlukeneyo zokufaka.
Ukuqaqamba: Umqondiso welanga, awufumaneki kwi-iOS okanye kwi-Android. Ilungisa ukuqaqamba komboniso.
Umsindo: I icon yesithethi. Ilungisa ivolumu kunye nolunye useto olunxulumene nesandi.
Ukufikeleleka: I icon yomntu, ayifumaneki kwi-iOS okanye kwi-Android. Yongeza okanye iguqula uhlengahlengiso ukunceda abo bangaboniyo okanye abangeva kakuhle.
Igalelo: Isithonjana sezitshixo zesikhombisi, esifumaneka kuphela kwiPC, Mac, PlayStation 4, okanye kwiXbox One. Lungisa imisebenzi eyabelweyo yekhibhodi kunye nempuku.
Umlawuli: I icon yomdlalo weqonga. Qwalasela umlo owabelweyo kunye nolawulo lokwakha xa usebenzisa iphedi yemidlalo.
Iakhawunti: I icon yomzimba. Ibonisa i-ID yakho yeAkhawunti ye-Epic kwaye ikuvumela ukuba ulungiselele ubumfihlo kunye noseto lwentlalo.
Useto lwePC ukhetho.
Uninzi lwezinto ezinokukhethwa kwiithebhu phantsi kweSeto zinesixhobo okanye esinye isicatshulwa esichazayo ukukunceda uqonde ukuba yintoni umsebenzi othile okanye useto olwenziwayo.
Yintoni i-hydroxyzine hcl 25mg esetyenziselwa
Musa ukoyika ukwenza utshintsho kuseto olwahlukeneyo wakube ukhululeke ngakumbi kumdlalo. Ungasoloko ukhetha Cwangcisa kwakhona ukuseta kwakhona iinketho zethebhu zibuyele kokungagqibekanga kwabo.
Itheyibhile yeVidiyo, ene-PC yayo eboniswe kulo mzobo ulandelayo, iqulunqwe ngokuzenzekelayo ukuze ikunike owona msebenzi ulungileyo kwinkqubo yakho. Nangona imenyu yeVidiyo ikhawulelwe ukuvula okanye ukucima i-Motion Blur kwi-Xbox One nakwi-PlayStation 4 (kwaye ayikho kwaphela kwiNintendo switch), ungayisebenzisa le menyu ukwenza ukubonakala nokusebenza komdlalo wakho kwiPC, Mac, iOS, kunye ne-Android. Ukuthetha ngokubanzi, ukuthoba okanye ukucima isetingi kubangela ukuphucula ukusebenza. Xa kuziwa kwisixhobo esinikwe ibhetri, ukunciphisa okanye ukucima useto kufuneka kuncede ukwandisa ubomi bebhetri ngokunjalo.
amayeza akhuselekileyo ngexesha lokuncancisa
Ithebhu yevidiyo yePC.
Ithebhu yoMdlalo we-Fortnite, ene-PC yayo eboniswe apha, yahlulwe yangamacandelo ngolu hlobo lulandelayo:
Ithebhu yomdlalo wePC.
Amacandelo aphambili achazwe ngolu hlobo lulandelayo:
Ummandla: Ngaphantsi koLwimi, unokuseta ulwimi ofuna ukulubonisa kuwo wonke umdlalo we-game. Ngaphantsi kommandla wokwenza umdlalo, useta ukuba yeyiphi imidlalo ye-Epic Games oya kuthi uqhagamshele kuyo. Kwiimeko ezininzi, ukushiya olu seto ku-Auto kukunika iziphumo ezifanelekileyo, kodwa ungaskrolela kukhetho ukubona ukuba ixesha lakho le-ping liphuculwe ngokutshintsha iiseva ngesandla.
Igalelo: Oku kubandakanya iinketho ezahlukeneyo ukuseta imouse, isilawuli, ukuchukumisa, okanye ubuntununtunu bokuhamba. Unokuguqula okuninzi kolawulo, umzekelo, ukuze ujonge phantsi xa ucofa isilawuli phezulu kunye nokuphikisana.
Ikhamera kunye nokubonisa: Eli candelo liyafumaneka kuzo zonke ngaphandle kwe-iOS kunye ne-Android, amanqaku ayo afanelekileyo aqengqelwe kwi-Input. Ezi setingi zivumela ukhethe ukuba igama lakho liyavela kwabanye abadlali, nokuba ufihle amanye amagama abanye abadlali, kunye nezinye izinto ezichaphazela ukuboniswa kolwazi lomdlalo.
Izinketho zolawulo: Lo mmandla ubeka indlela odlala ngayo kunye nokuphendula kwakho ngexesha lomdlalo. Uninzi lwezi zinto ziluncedo ngakumbi, ke kufanelekile ukuba zichazwe ngokweenkcukacha ezithe kratya:
Qhoboshela iSprint: Icwangcisa i-sprint ukuba iye kwi-off / off toggle okanye ekubanjweni kwe-sprint. Xa kuvuliwe, i-sprint isetelwe kwi-on / off toggle ngomatshini omnye wokushicilela.
I-Sprint ngokungagqibekanga: Xa uvuliwe, uyakhawuleza xa ushukuma kwaye ulawulo lwe-sprint luya kukwenza uhambe.
I-Sprint irhoxisa ukuphinda ilayishe: Xa uvuliwe, uyeka ukuphinda ulayishe isixhobo kwaye ukhuphe xa kusenziwa i-sprinting.
Cofa ukuze ukhangele / unxibelelane: Xa kuvuliwe, uPhando / ukuNxibelelana kufuna umatshini omnye wokushicilela. Xa ucimile, ulawulo kufuneka lubanjelwe ixesha lesibali-xesha.
Ukujolisa ekujolise kuko: Xa kuvuliwe, ulawulo lokujolisa kukucima / ukucima ukuguqula. Xa ucimile, ulawulo lokujolisa lubambe.
Misela kwakhona uKhetho loKwakha: Xa kuvuliwe, ukutshintshela kwimowudi yokwakha kuhlala kuzisa icandelo lokuqala lokwakha. Xa ucinyiwe, umdlalo ukhumbula ukuzisa isiqwenga sokugqibela osisebenzisayo.
Injongo yokuNceda: Xa kuvuliwe, kutsala iinjongo zakho kubadlali botshaba xa usebenzisa iphedi yomdlalo.
Hlela ukuNcedisa iMowudi: Xa uvuliwe, utsala injongo yakho usiya kwisikwere sokuhlela esiseduze xa usakha kwimowudi yokuHlela usebenzisa iphedi yemidlalo.
Isakhiwo seTurbo: Xa kuvuliwe, ukubamba iqhosha lokwakha ngokuzenzekelayo kuyaqhubeka nokwakha iqhekeza elikhethiweyo xa ujonga macala onke. Xa ucimile, ulwakhiwo ngalunye lufuna ucinezelo olunye okanye ucofe.
Cima iTurbo kwiNdlela yokuYila: Xa ivuliwe, yenza ukuba kube nakho ukucima ngokukhawuleza izinto kwimowudi yokuBamba ngokugcina phantsi iqhosha lokuCima.
Utshintsho lwezinto ezizenzekelayo: Xa uvuliwe, utshintshela ngokuzenzekelayo kuhlobo olutsha lwezinto xa uzama ukwakha kodwa ungabinakho okwaneleyo kwezinto ezikhethiweyo ngoku.
Ukusebenza ngokuzenzekelayo komlawuli: Xa uvuliwe, ukunqakraza kabini intonga yokuhamba ikwenza ukuba uqhubele phambili ngokuzenzekelayo ngaphandle kokufuna ukubamba intonga phambili.
Ukuvula ngokuzenzekelayo iingcango: Xa kuvuliwe, iingcango zivuleka ngokuzenzekelayo xa usondela kuzo.
Ukuthatha izixhobo ngokuzenzekelayo: Xa kuvuliwe, izixhobo zithathwa ngokuzenzekelayo xa ushukuma ngaphezulu kwazo, ngaphandle kokuba uluhlu lwakho lugcwele.
Uhlobo oluzenzekelayo lokuSebenzisa ekunene: Xa kuvuliwe, izinto ezisetyenziswayo ezinjengempilo kunye nezikhuselo zingagqibekanga kwindawo engenanto engenanto ye-Quickbar xa icholwa
Umakhi Pro: Yakha kwangoko: Xa kuvuliwe, xa utshintshela kwisiqwenga sokwakha esahlukileyo usebenzisa iBuilder Pro, iya kuzama ukwakha kwangoko.
Umlawuli Hlela ukuGcina ixesha: Icwangcisa ixesha lokubamba iqhosha lokungena kwimowudi yokuHlela.
Ingxelo: Icwangcisa ukungcangcazela kolawulo ngaphakathi nangaphandle. Kwi-hardware ekhethiweyo, unokuseta ezinye okanye izinto ezinxulumene nengxelo okanye ucime, kunye nokhetho lokuGcina amandla.
Ukudlala kwakhona: I-PC, iMac, i-PlayStation 4, kunye ne-Xbox One yabanini banokuvula ukurekhoda kwakhona, okurekhodayo kunye nokugcina ukuphindwa emva komdlalo ngamnye. Nangona kunjalo, ukurekhoda ukuphinda kunciphise ukusebenza kwaye kuthathe indawo yokugcina, ke yisebenzise ngobulumko.
Ithebhu yokuKhanya, ene-PC yayo eboniswe kulo mzobo ulandelayo, ikuvumela ukuba uhlengahlengise ukukhanya komboniso wakho. Ukuba udlala kwigumbi elimnyama, uya kufuna ukuthoba iseti yokukhanya. Kwigumbi elikhanyayo, uya kufuna ukuphakamisa useto lokukhanya.
Ithebhu yokuqaqamba kwePC.
Yintoni i-chlorhexidine gluconate
Ithebhu yeaudio, enePC version yayo eboniswe kulo mzobo ulandelayo, ikuvumela ukuba uhlengahlengise umculo, iziphumo zesandi, ingxoxo yelizwi, kunye nevolumu yesinema. Unokuvula okanye ucime imixholo engezantsi kwaye uhlengahlengise incoko yelizwi kunye noseto olunxulumene noko.
Ithebhu ye-PC yeaudio.
Ithebhu yokuFikelela, ene-PC yayo eboniswe apha, ekuvumela ukuba usete imo yoBala oluMfama, ulungiselele igalelo xa usebenzisa ulawulo olufikelelekayo, okanye ujonge iziphumo zesandi.
Ithebhu yokufikelela kwiPC.
Ithebhu yokufaka, ene-PC yayo eboniswe kulo mzobo ulandelayo, ikuvumela ukuba uhlengahlengise imephu yekhibhodi kunye nempuku. Le thebhu ifumaneka ngokusisigxina kwi-PC nakwi-Mac. I-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One abadlali banokufikelela kule thebhu kuphela ukuba badibanisa ikhibhodi kunye nemouse kwiingcebiso zabo.
Ithebhu yokufaka i-PC.
Isilawuli sethebhu, ene-PC yayo eboniswe kulo mzobo ulandelayo, ikuvumela ukuba ukhethe phakathi kokukhethwa komlo wesiko kunye nokwakha ulawulo, kunye nokulungelelanisa ubuntununtunu be-analog bomdlalo wakho womdlalo. Unokukhetha kwakhona ukumiselwa kwesiko kwaye unike ulawulo kunye namaqhosha phantse kuwo nawuphi na umsebenzi ongathanda. Kwi-PC nakwi-Mac, unokukhetha phakathi kwe-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One imigangatho yokulawula esekwe kuhlobo lomdlalo oyisebenzisayo.
icymbalta idosi eyi-120 mg
Ithebhu yolawulo lwePC.
Ithebhu yeAkhawunti, ene-PC yayo eboniswe kulo mzobo ulandelayo, yahlulahlulwe yaba luLwazi lweAkhawunti, uMxholo kunye nemisebenzi yoLuntu. Inqaku elithile yindawo yokuQala, apho unokucela ukubuyiselwa imali ngokuthenga okungasetyenziswanga, nangona ufumana kuphela ezo zicelo zizonke zobomi beakhawunti yakho.
Ithebhu yeakhawunti yePC.
ingakanani idiphenhydramine endinokuyithatha
tramadol iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide
valsartan hctz kunye notywala
dlulisa umculo usuke kwi-pc uye kwi-Android
mdala kangakanani iakhawunti yam ye-twitch
amayeza spasms esinyini